Madaxweyne Farmaajo iyo marwada kowaad ee dalka oo ka dhoofaya Garoonka Aadan Cadde
MUQDISHO, Soomaaliya - Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa goordhaw u ambabaxay magaalada Kampala, ee caasimadda dalka Uganda.
Madaxweyne Farmaajo oo ay wehliyeen xubno katitsan labada gole ee dowladda, ayaa lagu wadaa in uu kulan kula qaato Kampala dhigiisa dalkaasi Yoweri Kaguta Museveni, isagoo waydiisan doonoo taageero military si dowladdiisa uga adkaato Al shabaab.
Wararka Warsidaha Garowe Online uu helayo ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tagi doonoo dalka kale oo ku yaalla gobolka Geeska Africa, oo ay kamid yihiin Jabuuti iyo Ethiopia.
Dalalka uu booqanayo Madaxweynaha ayaa dhamanatooda Ciidamo ka jooga Soomaaliya, kuwaasi oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Africa ee AMISOM, kaasi oo mudo 10 sano ah ka howlgalaya Koonfur iyoo bartamaha dalka.
Safarka Madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya, xilli laguu wado inuu dhawaan ku dhawaaqo Xaalad dagaalka, oo la gelinayo dalka, kadib qaraxii 14-kii October ka dhacay Isgoyska Zoobe, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 358 qof.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Jabuuti...
Fahfaahin ku saabsan Safarka Madaxweyne Farmaajo
War Saxaafaded 22.10.2017. 16:18